Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ugonyo lwe-COVID lwaBantwana ngokuNgxamisekileyo Yithi ooGqirha be-ER
Njengoko izitofu zokugonya ze-COVID-19 zifumaneka kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11, i-American College of Emergency Physicians (ACEP) ibongoza abakhathaleli kunye neentsapho ukuba zigonywe kwaye zithathe amanyathelo ayimfuneko ukukhusela abantwana ngexesha leholide kunye nexesha lomkhuhlane elizayo.
"Oogqirha bexesha likaxakeka kwilizwe lonke bayaqhubeka nokubona ukuba ubungozi be-COVID-19 bunokuba yingozi kangakanani na kwizigulana zayo yonke iminyaka, ngakumbi kwabo bangagonyelwanga," utshilo uGillian Schmitz, MD, FACEP, umongameli we-ACEP. “Enkosi, izitofu zokugonya zikhuselekile, ziyasebenza kwaye ngoku ziyafumaneka. Ukugonya abantwana bakho yenye yeendlela ezilungileyo zokukhusela usapho lwakho kwaye usincede soyise intsholongwane.”
Abantwana abafane babe nengxaki yokugula kakhulu kwi-COVID-19 kunabantu abadala, kodwa imingcipheko evela kwi-COVID isebalulekile. Bamalunga ne-1.9 yezigidi zabantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kwe-11 abaye bafunyaniswa bene-COVID-19, ngokutsho kwamaZiko oLawulo lweSifo kunye noThintelo (CDC). Kuye kwakho malunga ne-8,300 esibhedlele kunye nesithathu efuna ukhathalelo olunzulu kwaye ubuncinci be-94 basweleka kwelo qela lobudala. I-CDC icebisa ukuba wonke umntu oneminyaka emi-5 nangaphezulu afumane isitofu sokugonya se-COVID-19.
Oogqirha bexesha likaxakeka bafuna ukuqinisekisa abakhathaleli ukuba izitofu zokugonya ezikhoyo zikhuselekile kwaye ziyasebenza. Uphuhliso lwechiza lokugonya alukhange lukhawulezelwe, kwaye ezi mveliso zilandela inkqubo engqongqo ukuhlangabezana nawo onke amanyathelo okhuseleko oLawulo lokuTya kunye namaYeza (FDA). Njengogonyo lwabantu abadala, bambalwa kakhulu abantu abafumana iziphumo ebezingalindelekanga. Ezona ziphumo bezingalindelekanga zixhaphakileyo ezibhalwe ngexesha leenkqubo zokhuseleko ezibanzi bezinobulali kwaye zilawuleka ekhaya, kubandakanywa nengalo ebuhlungu, ububomvu kufutshane nendawo yokutofa, okanye ukudinwa.
Wonke umntu unokuthatha amanyathelo okukhusela omnye komnye ngokugonywa kunye nokulandela izikhokelo zasekhaya, umgama ovela ekuhlaleni, kunye nokugquma ubuso bakhe. I-CDC icebisa ukuba abakhathaleli babeke iliso kunxibelelwano olusondeleyo lomntwana nabanye kwaye bathathe amanyathelo okukhusela umntwana ukuba nabani na ekhaya uyagula okanye uneempawu ze-COVID-19. Oko kunokuquka ukugcinwa komntwana ekhaya nokufuna inyameko efanelekileyo ukuba umntwana uyagula. Bobabini abantwana kunye nabantu abadala banokusasaza intsholongwane nokuba abanazo iimpawu.
Ukufumana ukhuseleko olongezelelekileyo ngexesha elinokuba lixesha lomkhuhlane oyingozi, oogqirha bexesha likaxakeka bakhuthaza abakhathaleli kunye nabantwana ukuba bagonyelwe zombini i-COVID-19 kunye nomkhuhlane. Kukhuselekile ukufumana isitofu somkhuhlane kunye nesitofu sokugonya se-COVID ngaxeshanye, kwaye akukabikho kade ukuba ufumane udubulo lomkhuhlane ngexesha lokuqalisa kwemozulu ebandayo kunye nexesha leholide elixakekileyo.
Njengoko abanonopheli bejonga abantwana kwiimpawu ze-COVID-19, ezinjengomkhuhlane ophezulu, umqala obuhlungu, ukukhohlela, isisu esibuhlungu, okanye intloko ebuhlungu, kubalulekile ukwazi ukuba uye nini na kwisebe likaxakeka, nokuba yeye-COVID-19 okanye nayiphi na enye into. ukugula okanye ukwenzakala.
UGqr. Schmitz uthi: “Kukho imiqondiso engxamisekileyo engafanele ihoywe. "Oogqirha abangxamisekileyo baqeqeshelwe ukuphatha zonke iintlobo zoloyiko lwezempilo, kwaye wonke umntu unokuqiniseka ukuba isebe likaxakeka yeyona ndawo ikhuselekileyo, kubaguli balo naliphi na ubudala, xa benengxakeko yonyango."